Kwimizuzwana emi-5 le app yewebhu izakususa imvelaphi yomfanekiso | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Enkosi kwezi webapps sinazo kuthungelwano lwenethiwekhi, singenza imisebenzi esindisa imizamo emininzi kunye nelo xesha esinokuthi sichithe ukuyenza. Susa.bg yile app yewebhu esivumela ukuba sisuse imvelaphi nawuphi na umfanekiso ngomzuzwana.
Kwaye nangona sinezifundo ezintle zokucima imali Ndiyayithanda lento, le app, nangona ineemeko zayo, iya kuyiphumeza kwimizuzwana emi-5 enkosi kubukrelekrele bokuzenzela ayisebenzisayo ukwenza wonke loo mlingo. Ngoku sinazo iziphene zakhe, kuba ayiyiyo yonke igolide ebengezelayo.
Izolo Besabelana ngolunye usetyenziso lwewebhu olumangalisayo iifonti. Ngaba ngoku Susa.bg leyo ethatha lonke udumo ukususa imvelaphi yomfanekiso apho abantu bahlala bevela khona.
Sifaka umfanekiso kwaye susa.bg uya kujonga ekususeni imvelaphi. Inkqubo ye- Iziphumo yifayile yePNG Ngokucaca kwayo ukuze sikwazi ukubeka ingxowa mali esiyifunayo. Konke kwimicimbi yemizuzwana kwaye enkosi kule app yewebhu simahla kweli qhagamshelo.
NjengoFontSpark, ujongano kunjalo Intuitive kakhulu, nangona ingekho buhle njengokuqala. Asinakusebenzisa iifoto kwimemori yethu kuphela, kodwa ivumela ukwaziswa kwe-URL ukuze inoxanduva lokususa imvelaphi yomfanekiso.
Inye kuphela kulinganiselwe ebantwini, ke ukuba usebenzisa isilwanyana, esisisebenzisileyo kweso sifundo se-Creativos Online, okanye into, iya kuyala ifayile. Ewe kunjalo, kuya kufuneka ujonge kufutshane kwisiphumo esinikiweyo, kuba ayigqibekanga ngokupheleleyo kwi-100%.
Omnye Usetyenziso lwewebhu ukususa imvelaphi kwimifanekiso ngemizuzwana kwaye ilungele loo misebenzi ekufuneka siyisuse ngokukhawuleza. Impumelelo enkulu njenge-app yewebhu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Uyisusa njani imvelaphi kuwo nawuphi na umfanekiso kwimizuzwana emi-5 kwaye ngaphandle komzamo
Oku akunzulu. Kuya kufuneka ufunde ukusebenzisa i-Photoshop, esona sixhobo sobuchule.